Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Duesseldorf HELAU! Adala amin'ny lamesa hankalaza ny fiainana!
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny firaketana ny isa Corona Virus dia tsy nanakana ny olona tao Dusseldorf, Alemaina hankalaza ny fiainana, inona no dikan'ny fankalazana ny fanombohan'ny Karnavaly androany.
Nifoha tao Dusseldorf ny Hoppeditz, fa tsy dia tao Cologne loatra!
Tany Dueselorf, Tanànan'i Alemaina ao amin'ny Reniranon'i Rhine, ny fanombohana dia nitranga androany 11 Novambra 2021 tamin'ny 11:11 maraina ho an'ny Session Carnaval 2021/2022
Ny karnavaly dia momba ny adala. Ary nivory teo anoloan’ny Lapan’ny Tanànan’i Dusseldorf izy ireo
Tapitra ny fotoana tsy misy karnavaly ao Dusseldorf.
Nifoha ny Hoppeditz. Amin'ny ora 11.11. tamin'ny 11.11 dia nandady avy tao amin'ny vilaniny voantsinapy izy ka namaky ny Levita adala tamin'ny lehiben'ny tanàna. Ny Ben'ny tanàna Dr. Stephan Keller dia namaly tamin'ny lahateny fohy avy teo amin'ny lavarangana, ary avy eo dia nidina tany amin'ny Hoppeditz Tom Bauer teo amin'ny kianjan'ny tsena izy.
Amin’izao fotoana izao, maro ireo namana karnavaly no tsy afaka nanaraka an-tsakany sy an-davany ny hetsika isan-taona nandrasana fatratra, toy ny tamin’ny taon-dasa, fa nivantana indray teny an-toerana.
An’arivony no nanararaotra izany ary niara-nifety tamin’ny fanombohan’ny fotoam-pivoriana.
Ny karnavaly ao Dusseldorf dia manana teny filamatra:
“Mankalaza ny fiainana isika”.
Taorian'ny lahatenin'i Hoppeditz dia nanolotra karnavaly vaovao teny an-kalamanjana manoloana ny lapan'ny tanàna ny Komity Düsseldorfer Carnival.
Anisan’izany ny Swinging Funfares sy ny KG Regenbogen, izay nitondra ny hira filamatra, Alt Schuss, Kokolores, De Fetzter sy ny maro hafa.
Ao amin'ny fotoam-pivoriana, ireo adala ao amin'ny renivohitry ny fanjakana dia hotarihin'ny Printsy Dirk II (Dr. Dirk Mecklenbrauck) sy Venetia Uåsa (Uåsa Katharina Maisch).
Ny 13 Novambra, ny Jecken kely indrindra dia mankalaza ny fifohazana mopeditz ho an'ny ankizy amin'ny Burgplatz amin'ny kodiaran'ny Ferris. Niklas Wesche, folo taona, avy amin'ny Rheinische Garde Blau-Weiss, dia hankalaza ny voalohany amin'ny maha-mopeditz ho an'ny ankizy.
Ny 19 Novambra ao amin'ny Stadthalle ny fifantenana ny mpivady andriana. Avy any Altweiber miaraka amin'ny Rathaussturm amin'ny 24 Febroary 2022, hiditra amin'ny dingana mafana ny fivoriana. Ny zava-nisongadina dia ny diaben'ny Alatsinainy Rose tamin'ny 28 Febroary 2022.
Indrisy anefa, tao amin'ny Cologne teo akaiky teo, tanàna misy ny Karnavaly ao amin'ny fototarazon'ny tsirairay, dia narary tamin'ny Corona Virus ny printsy.